Mpanamboatra sy mpamatsy SCREENING - Factory SCREENING China
BONOVO dia natao tamim-pahamendrehana ary namokatra siny fitiliana rotary mety ho an'ny mpangalatra 1-50t
Bonovo Rotary Screening Bucket dia natao ho henjana sy hampitombo ny vokatra. Ny Screening Drum dia vita amin'ny vy matevina boribory vy, manome fanasivanana sy fikirakirana ara-pitaovana tsara kokoa, fanaovana dingana fanoratana mahomby kokoa.
Ny fiasan'ny Bucket Screening Bonovo Rotation dia manala mora foana ny tany sy ny fako, amin'ny alàlan'ny fihodinana ny Screening Drum. Izany dia mahatonga ny fizotran'ny fanasivanana haingana, mora kokoa ary mahomby kokoa.
Tavoahangy sivana sivana maharitra sivana Bonovo siôve siève amin'ny habe rehetra
Bonovo Skeleton Screening Bucket dia ampiharina betsaka amin'ny fitaovana malalaka ao amin'ny governemanta, fambolena, ala, tetik'asa fiarovana rano, haben'ny efijery manaiky ny fanaingoana mifototra amin'ny tontolo iasan'ny mpanjifa.